The Irrawaddy's Blog: တိုင်းပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ
တိုင်းပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ
ဒီကနေ့ ရန်ကုန်၊ ဗိုလ်စိန်မှန် ကွင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်နဲ့ NLD တို့ရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဟောပြောပွဲမှာ ၈၈ မျိုး ဆက်ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောထားတဲ့ စကားတွေထဲက တခုပါ။
ဓာတ်ပုံ - ဂျေပုိုင် / ဧရာဝတီ
'' ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲစဉ်ခါတုံးက တိုင်းပြည်ရဲ့ထိပ်တန်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်လို့ ပြောကြပါ တယ်။ ဘယ်လိုလူ တွေပါသလဲ။ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ့်အသွေးအသားလို့ သဘောထားရမယ့် အစား
ပြည်သူ လူထုက တစုံတရာလိုချင်လို့ ငြိမ်းချမ်းစွာပြောတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်း တဲ့နေရာမှာ ထိပ်တန်းကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလား။ ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ ၊ နောက်မမွေးသေးတဲ့ ကလေးတွေပါ ပိုင်တဲ့
ပြည်ထောင်စု ကြီးရဲ့ သယံဇာတတွေကို ကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခွင့်အရေးအ တွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ညှိုး ထိုးပြီး ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းစားခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလား။'' ဟု ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကုိုနုိုင်က ဗုိုလ်စိန်မှန်ကွင်း တွင်ပြုလုပ်သည့် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လူထုဟောပြောပွဲ တွင်ပြောခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်တို. NLD ကတော. တကယ်ပါ ၊ သူအိမ်ရှေ. ဆန္ဒလာပြတော. ၊ မလုပ်ပါနဲ. ရုံးကိုစာလာတင်ပါတဲ. ၊ နောက်ကွယ်မှာကြတော. လမ်းထွက်ပြကြဖို. မြှောက်ပင်.ပေးနေတယ် ၊ ဒီတခါ မြေယာသိမ်းခံထားရတဲ.ပြည်သူတွေကို ( ၈၈ ) ရုံးရှေ. ဆန္ဒပြခိုင်းကြည်.ရမယ် ၊ သူတို.ကောဘာပြောမလည်းသိချင်လို.ပါ ၊ ကိုယ်ဆီကြတော.အလာမခံဘူး ၊ လမ်ဘေးမှာကြတော. တနေကုန်ပြကြပါ ၊မရမခြင်းပြကြပါဆိုပြီးမြှောက်ပေးတယ် ၊ တော်တော် ပြည်သူတွေကိုချစ်ကြတာဘဲနော် ၊ နိင်ငံရေးသမားစစ်စစ်တွေပါ ။
Of course permission from the Authority is required to protest. Did u getapermission?